In Zimbabwe, boys are offered boxing instead of despair | Daily Mail Online
Published: 05:19 EDT, 20 April 2017 | Updated: 05:30 EDT, 20 April 2017
CHITUNGWIZA, Zimbabwe (AP) - Zimbabwean boys as young as 10 hurry every weekend to a boxing ring whose nickname, Wafa Wafa, in the local Shona language suggests that whoever enters will be lucky to come out alive.
In this Saturday, Feb. 12, 2017 photo, young boys fight in a boxing ring in Chitungwiza, Zimbabwe. Zimbabwean boys as young as 10 hurry every weekend to a boxing ring whose nickname, Wafa Wafa, in the local Shona language suggests that whoever enters will be lucky to come out alive. (AP Photo/Tsvangirayi Mukwazhi)
In this Sunday, March 11, 2017 photo, children fight in a boxing ring in Chitungwiza, Zimbabwe. Zimbabwean boys as young as 10 hurry every weekend to a boxing ring whose nickname, Wafa Wafa, in the local Shona language suggests that whoever enters will be lucky to come out alive. (AP Photo/Tsvangirayi Mukwazhi)
In this Feb. 12, 2017 photo, a young boy nose bleeds after taking a few punches in a boxing ring in Chitungwiza, ZImbabwe. Zimbabwean boys as young as 10 hurry every weekend to a boxing ring whose nickname, Wafa Wafa, in the local Shona language suggests that whoever enters will be lucky to come out alive. (AP Photo/Tsvangirayi Mukwazhi)
In this Sunday, March 11, 2017 photo, a young boy rests on the ropes after a boxing fight in Chitungwiza, Zimbabwe. Zimbabwean boys as young as 10 hurry every weekend to a boxing ring whose nickname, Wafa Wafa, in the local Shona language suggests that whoever enters will be lucky to come out alive. (AP Photo/Tsvangirayi Mukwazhi)
In this Sunday, March 11, 2017 photo, a referee invites young boys into the boxing ring in Chitungwiza, Zimbabwe. Zimbabwean boys as young as 10 hurry every weekend to a boxing ring whose nickname, Wafa Wafa, in the local Shona language suggests that whoever enters will be lucky to come out alive. (AP Photo/Tsvangirayi Mukwazhi)
In this Sunday, March 11, 2017 photo a young boy prepares to fight in Chitungwiza, Zimbabwe. Zimbabwean boys as young as 10 hurry every weekend to a boxing ring whose nickname, Wafa Wafa, in the local Shona language suggests that whoever enters will be lucky to come out alive. (AP Photo/Tsvangirayi Mukwazhi)
In this Feb. 12, 2017 photo, a young boy is restrained by a referee during a boxing match in Chitungwiza about 30 kilometres south east of Harare. Zimbabwean boys as young as 10 hurry every weekend to a boxing ring whose nickname, Wafa Wafa, in the local Shona language suggests that whoever enters will be lucky to come out alive. (AP Photo/Tsvangirayi Mukwazhi)
In this Sunday, March 11, 2017 photo, a referee gives children instructions before they fight, in a boxing ring in Chitungwiza. Zimbabwean boys as young as 10 hurry every weekend to a boxing ring whose nickname, Wafa Wafa, in the local Shona language suggests that whoever enters will be lucky to come out alive. (AP Photo/Tsvangirayi Mukwazhi)
In this Sunday, March 18, 2017 photo, children follow a boxing match in Chitungwiza about 30 kilometres south east of Harare. iZimbabwean boys as young as 10 hurry every weekend to a boxing ring whose nickname, Wafa Wafa, in the local Shona language suggests that whoever enters will be lucky to come out alive. (AP Photo/Tsvangirayi Mukwazhi)
In this Saturday, Feb. 12, 2017 photo, children prepare a boxing ring in Chitungwiza, ZImbabwe. Zimbabwean boys as young as 10 hurry every weekend to a boxing ring whose nickname, Wafa Wafa, in the local Shona language suggests that whoever enters will be lucky to come out alive. (AP Photo/Tsvangirayi Mukwazhi)
In this Saturday, Feb. 12, 2017 photo, organisers set up a boxing ring in Chitungwiza, Zimbabwe. Zimbabwean boys as young as 10 hurry every weekend to a boxing ring whose nickname, Wafa Wafa, in the local Shona language suggests that whoever enters will be lucky to come out alive. (AP Photo/Tsvangirayi Mukwazhi)
In this Saturday, Feb. 12, 2017 photo, children follow a boxing match in Chitungwiza, Zimbabwe. Zimbabwean boys as young as 10 hurry every weekend to a boxing ring whose nickname, Wafa Wafa, in the local Shona language suggests that whoever enters will be lucky to come out alive. (AP Photo/Tsvangirayi Mukwazhi)